Vari Kukwikwidza Musarudzo Voshungurudzwa neZanu PF
Nhengo yeUnited People’s Party, kana kuti UPP, VaRainos Tivatyi, avo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mumiriri weparamende muZengeza East, vanoti vakarohwa nenhengo dzeZanu-PFnemusi weChipiri vakakuvara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi. VaTivatyi vaudza Carole Gombakomba weStudio 7 kuti havaoni sarudzo dzegore rino dzakachena, sezvo bato reZanu-PF riri kushandisa chisimba pakutsvaga rutsigiro.
Zvichakadaro, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende muUzumba vakamirira MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Muzvare Florence Machinga, vanoti nemusi weChipiri vakambopambwa vakachengetedzwa kwemaawa anosvika mana nevatsigiri veZanu PF kwakare kuUzumba.
Muzvare Machinga vnoti vatsigiri veZanu PF ava vaivanyomba vachivasveeredza vachiti Uzumba yakanga isiri nzvimbo yeMDC.
Muzvare Machinga vanoti vatsigiri veZanu PF ava, avo vaisanganisira vari kumirira bato iri musarudzo dzemakanzuru muUzumba neMaramba-Pfungwe, pamwe nevari kukwikwidza musarudzo dzeparamende muMaramba-Pfungwe, vakazovaisa mumaoko emapurisa paMutawatawa, vachivapomera mhosva yekubvarura maposter eZanu PF.
Muzvare Machinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio7 kuti mapurisa akazovarega vachiti havana kuona paine mhosva yakange vapara.